သေးသွယ်တဲ့ ခါးပိုင်ရှင်လေးဖြစ်အောင် ဘာတွေဝတ်ရမလဲ ? – MyStyle Myanmar
သေးသွယ်တဲ့ ခါးပိုင်ရှင်လေးဖြစ်အောင် ဘာတွေဝတ်ရမလဲ ?
ဖက်ရှင်ချစ်သူမိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ အိမ်မက်က ခါးသေးသေးလေးပိုင်ဆိုင်ရဖို့ပဲ ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ခါးလေး သေးသွယ်နေတာကို လိုချင်ကြပြီး ခါးတုတ်တုတ်ကြီး ဖြစ်နေတာမျိုးကိုတော့ ဘယ်မိန်းကလေးကမှ သဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သေးသွယ်တဲ့ခါးလေးပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ထင်ရဖို့အတွက် ဘယ်လိုအဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီး ဖန်တီးလို့ရသလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
၁။ ခါးသေးတဲ့အသွင် ထင်ရစေဖို့အတွက် မပါမဖြစ်ကတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် High Heels တွေပါ။ ဖိနပ်အပါးတွေစီးခြင်းက သင့်ကို ခါးတုတ်တဲ့အသွင် ဖြစ်သွားစေပါတယ်။
၂။ သင့်ရဲ့ခါးလေးကို သေးသွယ်တယ်ထင်ရဖို့အတွက် အရောင်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အရောင်ရင့်ရင့်နဲ့ အရောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေက အကောင်းဆုံးပါ။ လွင်တဲ့အရောင်တွေနဲ့ ဖျော့တဲ့အရောင်တွေက သင့်ရဲ့ခါးကို နဂို ရှိတဲ့အရွယ်အစားထက် ပိုကြီးတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ အရောင်ဖျော့ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပိုင်းကို အဖျော့ဝတ်ပြီး အပေါ်အင်္ကျီကို အဲ့ဒီအဖျော့ထက်ပိုရင့်တဲ့အရောင်မျိုးဝတ်ဆင်ပါ။
၃။ အနက်ရောင်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ခြင်းက ခါးသေးတဲ့အသွင်ဖြစ်စေပြီး အဖြူရောင်ကတော့ လက်ရှိခါးအရွယ်အစားထက်တောင် ပိုကြီးတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ အဖြူကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ အဖြူခံမှာ အနက်ရောင်ပါတဲ့အဆင်မျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။
၄။ ဒေါင်လိုက်စင်းပါတဲ့ အဝတ်အစားမျိူးဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်ရဲ့ခါးကိုသေးတယ်လို့ ထင်ရစေပါတယ်။ ကန့်လန့်စင်းတွေအဆင်တွေနဲ့ အစက်အပြောက် သေးသေး အဆင်မျိုးတွေကိုတော့ လုံးဝရှောင်ပါ။
၅။ ခပ်ပွပွဖြစ်တဲ့ Oversized အဝတ်အစားတွေဟာ သင့်ရဲ့ခါးကိုသေးသွယ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆွယ်တာ၊ တီရှပ်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အောက်ပိုင်းကိုတော့ High-Waist လို့ ခေါ်တဲ့ ခါးမြင့်ဘောင်းဘီ (ဒါမှမဟုတ်) စကဒ် တွေက သင့်ကို ခါးသေးတဲ့အသွင်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ V-Cut တွေနဲ့ Wrap Dress တွေကတော့ ခါးသွယ်တဲ့မိန်းကလေးအသွင်ဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဒါတွေကတော့ ခဏတာခါးသေးတဲ့အသွင်ကိုရစေမယ့် ဖက်ရှင် Trick လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သေးသွယ်တဲ့ခါးလှလှလေးကို ထာဝရ ပိုင်ဆိုင် ချင်ရင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပြီး သင့်တင့်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ ထိန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2021-06-11T11:18:05+06:30September 24th, 2020|Fashion, စတိုင်လ်အကြောင်း အကြံပေး – Style Advisor|